LUDOGORETS VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan! – Gool FM
LUDOGORETS VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay fiidkii kusoo geli karaan!
Raage February 15, 2018
(Razgard) 15 Feb 2018 – Waxaa caawa fiidkii ballansan labada kooxood ee Ludogorets iyo AC Milan oo ku ballansan wareegga 32-ka ee koobka Europa League.
Dhanka Ludo: Macallin Dimitrov ayaa ku howlgelaya shaxda 4-2-3-1 taasoo uu rajeeynayo inuu Milan ku dhibaateeyo isagoo adeegsanaya kaynaanta weerarkiisa. Daafaca waxaa ka dhex muuqda laacibkii hore ee kooxda Siena ee Moti.
Dhanka Milan: Gattuso wuxuu ku tiirsanaan doonaa laacibiinta safka 1-aad, kuwaasoo kooxdiisa ka caawiyay inuu jadwalka si tartiib ah sare ugu dhaqaaqo dhanka horyaalka. Waxaa boos dadabka daafaca ah isku haysta Abate iyo Rodriguez, iyadoo uu ninka hore cadcad yahay. Weerarka Cutrone ayaa fooska ka xiga André Silva.
1 BROUN, 5 TERZIEV, , 19 VASILEV, 23 KERCHEV, 10 CAMPANHARO, 44 GORALSKI, 93 MISIDJAN
90 A. DONNARUMMA, 68 RODRIGUEZ 22 MUSACCHIO, 17 ZAPATA, 18 MONTOLIVO, 9. ANDRE’ SILVA , 11 BORINI
Conti, Storari, Kalinic
''Runtii waan ooyi gaarey, waxaan ahay madaxwaynihii ugu horreeyay ee Talyaani ah, xulkii Talyaaniguna wuxuu ka maqan yahay KA2018'' - Infantino oo u baaqay inuu Buffon FIFA kusoo biiro
SSC NAPOLI VS LEIPZIG: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!